Iyo iPhone SE inodya zvigadzirwa zveChinese munyika yavo | IPhone nhau
Iyo iPhone SE ichave kukundikana vakati, masendimita mana chinhu chidiki chavakataura, dhizaini yeiyo iPhone 5 haifarire chero munhu wavakati ... Iyo iPhone SE haimire kukohwa nhamba dzakanaka kwese kwayinoenda, ndiko kuti chimwe chinhu chisina munhu akashinga kutaura. Uye ndeyekuti iyo huru diki Apple foni yaona stock yayo kusvina muSpain, United States uye chikamu cheEurope, asi senguva dzose, Apple michina inodarika miganhu, uye zvaisazove zvishoma neiyo iPhone SE. Isu tinoona kuti mushure mekugamuchira anopfuura mamirioni matatu ekubhuka mumwedzi wekutanga, iyo iPhone SE iri kuwana pasi kune zvigadzirwa seHuawei kana Xiaomi muChina.
Zviripachena, kunyanya mune zvidiki, zvigadzirwa zvakaita seHuawei zvaive zvichitonga kusvika parizvino munyika mavo, ivo vanopa zvirinani maficha pamutengo wakaderera. Nekudaro, kusvika kweiyo iPhone SE uye mutengo waro usingakundiki unoratidzika kunge watyora bubble kuChina kubva kumakambani akati wandei kuti kusvika zvino vanga vasati vamboona bhizinesi ravo richityisidzirwa. Sekureva kweshumo rakapihwa na DigiTimes Aya makambani ari kuona kuti iyo iPhone SE iri kuve mudziyo unofungidzirwa, saka maChinese mafemu ari kutanga kurasikirwa nemutambo pamba.
Kuvhurwa kwemutengo wakaderera kweiyo iPhone SE muChina kwakagwamba mugove wemusika wemakambani emuno akaita seHuawei, Xiaomi, Vivo naOppo, zvichikanganisa zvavo purofiti.
Aya masendimita mana akatorwa nevamwe "nyanzvi" kuti vafe, mushure mekumisikidzwa kwemapanera mahombe (kunyangwe ari emhando yepasi) mune chero mhando yemagetsi, haamire kushamisika nekufamba kwenguva. Pangori nemwedzi chete mumusika, vashoma vakafungidzira kugamuchirwa kwakanaka kweiyi foni, uko server yakamhanyira kuti ibudirire iyo vamwe vaida kuramba. mavhiki mashoma apfuura mune ino positi. Iyo iPhone SE inoenderera ichiwana ivhu, yepakati-renji mutengo ine yekucheka-kumucheto maficha. Kana usati waona yedu yakadzama ongororo yeiyo iPhone SE isu tinokusiya iwe chinongedzo kune iyo positi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » Iyo iPhone SE inodya zvigadzirwa zveChinese mune hofori yeAsia
Buuuaaa buuua buuua varombo vanovenga !! Vachave vachichema zvisingaite. Kuti ndiko kugadzirisa, kuti ivo havatengese, kuti ndiko kukundikana, kuti ... Blah blah blah
Yese yekutengesa kubudirira, bang mune vese vanovenga muromo !!
China inovhara chitoro chebhuku uye chitoro chemuvhi cheApple, ndinofunga kuti nhau idzi dzakabatana neiyi yakaburitswa, haufunge?
Mhoro Jorge. Isu tiri mune yechipiri trimester uye imomo tinotaura nezve yekutanga. Muchiyero chekutanga chemari (Ndira) iyo data yaGumiguru, Mbudzi naZvita wegore rapfuura inounganidzwa. Muchikamu chechipiri (Kubvumbi), iyo data yaNdira, Kukadzi naMarch inounganidzwa. Iyo iPhone SE yakaunzwa munaKurume 21.
B & O inotangisa BeoPlay A1, inotakurika Bluetooth mutauri